VACGF 150006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၅၀၀၀
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၅၀၀၀
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACGF15000
VACGF15000 Automatic Bottle Filling 6-In-1 Machine consists of an AC-2 air conveyor,awashing, filling, capping and cap loading system and an anomaly inspection machine,
This VACGF150006in 1 automatic pet bottle filling machine is distributed and installed by Viet An General Trading Joint Stock Company.
VACGF150006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်မှာ AC-2 လေရွေ့လျားစက်၊ ဆေးကြောခြင်း၊လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းနှင့် အဖုံးတွေကို သယ်ပေးသောစနစ်နဲ့ မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးသောစက်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီ VACGF150006In 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို Viet An အထွေထွေရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးပါတယ်။
The machine is manufactured using the most modern filling technology of the United States With the filling capacity of 13,000 -15,000 300ml/h-500ml bottles /hour and 4,000-4,500 1,500ml bottles/hour, this filling machine will help youalot in automatically producing bottled water.
ဒီစက်ကို US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ တစ်နာရီမှာ 500 ml ဘူး ၁၃၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀၊ 1500 ml ဘူး ၄၀၀၀ မှ ၄၅၀၀ စသဖြင့်် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီစက်က ရေဘူးတွေကို အော်တိုထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ အကူအညီအများကြီး ပေးပါတယ်။
With6built-in automatic steps integrated, this VACGF15000 will help to bring the enterprises with high productivity of filling purified water, non-carbonated soft drinks into PET bottles. This product can replace 15 operators.
VACGF 15000 စက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ကြောင့် ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အချိုရည်ထုတ်လုပ်ခြင်း စတဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း မြင့်မားစေပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်ပရေတာ ၁၅ ယောက်နေရာမှာ အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
This model applies the most modern technology currently and offers the best operation performance so that the manufacturers can remarkably reduce labor cost.
ဒီမော်ဒယ်က ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး လုပ်ဆောင်မှုကောင်းမွန်တာကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေက အလုပ်သမားစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
VACGF150006in 1automatic bottle filling machine supplied by Viet An
Viet An မှ VACGF 150006In 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
VACGF15000 model belongs to Bottle filling and capping machine6in 1 automatic and is built with sophisticated design and high-quality 304 stainless steel material. Thanks to its special material, the machine can work properly inawet environment while remaining in good condition. This is one of the outstanding features of the automatic filling machines supplied by Viet An.
VACGF150006In 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသော စက်ကို လှပအောင်ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့် 304 စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်ကို စိုစွတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ထားလို့ ရပါတယ်။ ဒါက VACGF150006In 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသော စက်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The machine is manufactured using the most advanced water filling and dosing technology of the United States This model is further improved compared to the previous one. VACGF15000 is equipped with washing, filling and capping heads to improve manufacturing capacity compared to the previous automatic filling machines.
ဒီစက်ကို US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး ရေလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အရင်စက်ထက် ဒီစက်ကို ပိုပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း ပိုများအောင် VACGF15000 ကို ဆေးကြောခြင်း၊လောင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း ခေါင်းတွေနဲ့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
Viet An - the best provider of automatic6in 1 bottle filling machine in Vietnam
Viet An- ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်6in 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်များကို အကောင်းဆုံး ဖြန့်ဖြူးပေးသော ကုမ္ပဏီ
Viet An General Trading Joint Stock Company has been equitized since Aug/2009. We arealeading enterprise in providing modern industrial machines for the food processing industry. All out machines, including filling machines, bottle blowing machines, water filtration lines, tube ice making machines, are genuine with high quality, meeting ISO 9001:2015 standard.
Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီက အစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေအတွက် ခေတ်မီတဲ့ စက်ရုံသုံးစက်တွေကို ပေးတဲ့နေရာမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်၊ ဘုးတွေကို မှုတ်ပေးတဲ့စက်၊ ရေစစ်လိုင်းများနဲ့ ရေခဲစက်အပါအ၀င် စက်တွေအားလုံးက အရည်အသွေးမြင့် စစ်မှန်ပြီး ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Viet An ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း မူပိုင်တံဆိပ်- ISO 9001 စံ
For Viet An, we always focus on technical improvement, updating new technology and improving the quality of customer services. Thus, so far, we have been highly appreciated by domestic and foreign customers.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viet An ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင် နည်းပညာတိုးတက်မှု၊ နည်းပညာအသစ်တွေ အဆင့်မြှင့်တင်မှုနဲ့ ၀ယ်ယူသူတွေအပေါ် ၀န်ဆောင်မှု အရည်အချင်းတွေကို အမြဲတမ်း အာရုံစိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပက ၀ယ်ယူသူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံရပါတယ်။
Viet An is proud to be listed in “Top 100 Enterprises” to report achievements and pay New Year's visits to President Truong Tan Sang, President Tran Dai Quang, and Prime Minister Nguyen Xuan Phuc at the President Palace in recent years.
Viet An မှ မကြာသေးမီက သမ္မတ Truong Tan Sang, သမ္မတ Tran Dai Quang နဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် Nguyen Xuan Phuc တို့ထံ သမ္မတအိမ်တော်မှာ နှစ်သစ်ကူးအလည်အပတ်သွားရတဲ့ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် အလွန်ပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
What we have honorably received is thanks to the ingenious leadership of the company leaders, modern equipment and skilled technical team, professional production management, solidarity and creativity of the staff. Viet An is committed to providing customers with the best quality products, the cheapest price, and the best warranty service.
ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ လက်ခံခဲ့တဲ့ ဆုတွေကတော့ ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တီထွင်နိုင်မှုကောင်းတဲ့ ဦးဆောင်မှု၊ ခေတ်မီတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အဖွဲ့၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်သော ထုတ်လုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲချက်၊ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စည်းလုံးမှုနဲ့ တီထွင်ကြံဆနိုင်မှုတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Viet An မှ ၀ယ်ယူသူတွေကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချပေးနေပြီး အကောင်းဆုံး အာမခံ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေကြောင်း အာမခံပါတယ်။
Why should use Viet An’s VACGF150006in 1 automatic filling machine
Viet An မှ VACGF150006In 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို ဘာကြောင့် သုံးသင့်တာလဲ?
+ The most modern technology
This model applies the most advanced filling technology of the United States Withasmart control panel integrated, the operators can adjust the washing, filling, and capping speed easily. All operation data is clearly displayed on the LCD screen of the control panel. The entire operation is displayed on the LCD screen of the control panel.
ဒီစက်မှာ US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာကို သုံးထားပါတယ်။ စမတ်ကျတဲ့ ထိန်းချုပ်ဘောင်ပါတာကြောင့် အော်ပရေတာတွေက ဆေးကြောခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ခြင်းတွေကို လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးက ထိန်းချုပ်ဘောင်မှာပါတဲ့ LCD စခရင်မှာ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
+ ISO 9001:2015 Standard+ ISO 9001:2015 StandardVACGF15000 Automatic Bottle Filling 6-In-1 Machine is manufactured and installed according to ISO 9001:2015 standard. Every process is strictly inspected to meet the standards.
ISO 9001:2015 စံနှုန်း VACGF150006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အဆင့်အားလုံးကို စံချိန်မီအောင် တင်းကြပ်စွာ လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
+6automatic steps to replace 15 operators
အော်ပရေတာ၁၅ ယောက်နေရာတွင် အစားထိုးနိုင်သော အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်
● Air conveyor: transfer the bottles to the washing heads automatically
● လေရွေ့လျားစက် - ဘူးတွေကို ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်းတွေဆီကို အော်တိုရွှေ့ပေးပါတယ်
● Bottle washing unit: automatically wash the bottles with the most advanced washing heads
● ဘူးတွေကို ဆေးပေးသော ယူနစ်- ဘူးတွေကို ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာနဲ့ အော်တိုဆေးကြောပေးပါတယ်။
● Filling unit: fill the water in the bottles automatically and quickly with proper amount
● ဖြည့်ပေးသော ယူနစ်- ဘူးတွေထဲကို သင့်တော်တဲ့ပမာဏနဲ့ လျင်မြန်စွာ အော်တိုဖြည့်ပေးပါတယ်
● Capping unit: proceed bottle capping quickly and exactly, ensuring quality of the caps
● အဖုံးတပ်ပေးသော ယူနစ်- အဖုံးရဲ့ အရည်အသွေးမပျက်စေဘဲ တိကျလျင်မြန်စွာ အဖုံးတပ်ပေးပါတယ်
● Cap loading machine: Load and arrange the caps properly through an air blowing system
● အဖုံးသယ်ပေးတဲ့စက်- လေမှုတ်စနစ်ကို ဖြတ်ပြီး အဖုံးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးပါတယ်
● Anomaly inspection machine: Detect the anomaly inside the bottles quickly and exactly
● မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးတဲ့စက်- ဘူးထဲမှာ ရှိတဲ့ မူမမှန်မှုကို တိကျလျင်မြန်စွာ စစ်ဆေးပေးပါတယ်
+ Manufacturing cost saving
This machine can help to reduce 15 operators with6built-in automatic steps. The business can save more than 100 million dongs/month on average. The maximum operation capacity can reach 15,000 bottles. This is the perfect solution for the businesses to increase their competitiveness and profits.
ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာခြင်း
ဒီစက်ရဲ့ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ကြောင့် အော်ပရေတာ ၁၅ ယောက်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ တစ်လမှာ ပျမ်းမျှ ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၁၀၀ ကျော် ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ ဘူးပေါင်း ၁၅၀၀၀ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် စီးပွါးရေးချဲ့ထွင်ဖို့နဲ့ အကျိုးအမြတ်များဖို့ အကောင်းဆံးသော အဖြေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
+ A wide range of bottles to be filled: This model is flexibly designed so that it can be used with different types of pet bottles, including 300ml, 500ml and 1,500ml bottles.
ဘူးတွေ အများကြီးကို ဖြည့်နိုင်ခြင်း- ဒီမော်ဒယ်က 300ml,500ml,1500ml အစရှိတဲ့ ဘူးပေါင်းစုံကို ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
+ Long shelf life:
The shelf life can reach up to 15 years. The water tanks, machine frame and many other components of this model are made of stainless steel, bringingalong shelf life of more than 15 years. The machine is designed with stable performance and less maintenance required,
ဒီစက်ကို ၁၅ နှစ်အထိ ထားသိုနိုင်ပါတယ်။ ရေစည်တွေ၊ စက်ဖရိန်နဲ့ အစိတ်အပိုင်း တော်တော်များများကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ၁၅ ကျော်တဲ့အထိ ခံပါတယ်။ ဒီစက်ကို လုပ်ဆောင်မှုတည်ငြိမ်ပြီး ထိန်းသိမ်းမှုအများကြီး မလိုအပ်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
6 automatic steps of VACGF15000 Automatic Bottle Filling Machine
VACGF15000 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်
First step: AC-2 air conveyor
ပထမအဆင့်- AC-2 လေရွေ့လျားစက်
There isaframe to support the conveyor. The air conveyor operates with AC-2 air pressure. It has the function of putting the bottles together and transferring the bottles to the washing unit automatically. This unit plays an important role in the entire filling process because the bottles might be distorted during the clamping process if they are not put together by the air conveyor system. This will badly affect the entire production process.
ရွေ့လျားစက်ကို အထောက်အကူပြုတဲ့ ဖရိန်ရှိပါတယ်။ လေရွေ့လျားစက်က AC-2 လေဖိအားနဲ့ လည်ပတ်ပါတယ်။ သူက ဘူးတွေကို အတူထားပေးပြီး ဆေးကြောတဲ့ ယူနစ်ဆီကို အော်တိုရွှေ့ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘူးတွေကို အတူမထားထားဘူးဆိုရင် ညှပ်က လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ပုံပျက်သွားနိုင်တာကြောင့် ဒီအဆင့်က အရေးပါပါတယ်။
၂+၃+၄ အဆင့်များ-ဆေးကြောခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ခြင်းနှင့် အဖုံးတပ်ခြင်း
+ Automatic bottle washing
Equipped with 32 washing heads, VACGF15000 model offers much higher productivity (32 bottles to be washed at one time) compared to the previous models. All the frame, bottle clamping unit, bottle picker, washing heads are made stainless to avoid rust, ensuring safety and hygiene as well as durability.
VACGF15000 စက်မှာ ခေါင်း ၃၂ ခုပါတာကြောင့် တစ်ခါတွင် ဘူး ၃၂ ဘူး ဆေးကြောပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖရိန်အားလုံး၊ ဘူးညှပ်ပေးတဲ့ယူနစ်၊ ဘူးကောက်ပေးသောစက်၊ ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်းများကို သံချေးတက်ခြင်းမရှိဘဲ လုံခြုံစိတ်ချရကာ ကြာရှည်ခံတဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Compared to the previous6in 1 automatic models, VACGF15000 automatic filling machine is equipped with up to 32 filling heads to bring much higher filling productivity. All our filling heads are imported from Italy. The machine is equipped with an eye sensor to ensure the water is quickly and properly filled into the bottles withaprogrammed amount.
VACGF 15000 မှာ ခေါင်း ၃၂ ခု ပါသောကြောင့် လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားပါတယ်။ ဒီခေါင်းတွေကို အီတလီကနေ တင်သွင်းပါတယ်။ဒီစက်မှာ ပရိုဂရမ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ ပမာဏအတိုင်း လျင်မြန်စွာ ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ မျက်လုံးဆင်ဆာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
VACGF15000 model enables capping 10 bottles simultaneously thanks to 10 capping heads integrated. Even capping force and high speed of capping. The capping heads are made of steel and coated withalayer of 304 stainless steel, bringing high aesthetics. Safe operation, long durability
VACGF 15000 စက်မှာ ခေါင်း ၁၀ ခု ပါတာကြောင့် ဘူး ၁၀ ဘူးကို တပြိုင်နက် အဖုံးတပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းတွေကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး 304 စတိန်းလက်စ်စတီး အလွှာနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လှပပြီး လုပ်ဆောင်မှုကောင်းကာ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
Fifth step: Automatic cap loading machine:
ပဉ္စမအဆင့်- အဖုံးများကို အော်တိုသယ်ပေးသောစက်
Automatic cap loading machine- အဖုံးများကိုအော်တိုသယ်ပေးသောစက်
The machine consists of one cap tray made of stainless steel. The tray can contain up to 20,000 caps. The operator just needs to supply the caps to the tray onceashift. The motor system to move the conveyor. The conveyor í supported by the frame. The caps are blown to the cap loading unit through the air blowing system. The cap loading machine plays an important part in loading the caps automatically and keeping the caps not reversed. Thanks to this automatic process, the manufacturing process can remain stable. This unit playsacrucial role in the entire filling process of the VACGF15000 automatic filling machine.
ဒီစက်မှာ စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အဖုံးသယ်တဲ့ဗန်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဗန်းထဲမှာ အဖုံး ၂၀၀၀၀ ထိ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အော်ပရေတာတွေက အလှည့်တစ်ခါပြောင်းတိုင်း အဖုံးတွေကို သယ်ပေးရုံပါပဲ။ မော်တာစနစ်က ရွေ့လျားစက်ကို ရွှေ့ပေးပါတယ်။ ရွေ့လျားစက်မှာ ဖရိန်ပါပါတယ်။ အဖုံးတွေကို လေမှုတ်ပြီး အဖုံးသယ်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးပါတယ်။ အဖုံးတွေ ဇောက်ထိုးမဖြစ်စေဖို့ ဒီစက်က အရေးပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးအတွက်လည်း ဒီအဆင့်က အရမ်းအရေးပါပါတယ်။
Sixth step: Anomaly inspection machine:
Anomaly inspection machineမူမမှန်မှုစစ်ဆေးပေးသောစက်
The machine consists ofaframe made of 304 stainless steel to support the inspection light system,
The operators use the light to detect any anomaly inside the bottles at random.
In addition, the VACGF15000 Automatic Bottle Filling 6-In-1 Machine is also equipped withaplastic conveyor system to transfer the bottles automatically and quickly, from which saving time and space remarkably.
ဒီစက်မှာ စစ်ဆေးပေးတဲ့ အလင်းစနစ်အတွက် 304 စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖရိန်တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။
အော်ပရေတာတွေက ဘူးထဲက မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးပေးဖို့ အလင်းကို အသုံးပြုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် VACGF 150006In 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်မှာ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး နေရာချွေတာရန် ဘူးတွေကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ လျင်မြန်စွာ ရွှေ့ပေးတဲ့ ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက်စနစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Other automatic stages - purchased separately (optional)သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
အပေါ်က အဆင့်တွေအပြင် အောက်ကအဆင့်တွေလည်း ထပ်ပြီး ၀ယ်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။
1. VALP12000 bottle loading and arranging machine
VALP 12000 ဘူးများကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
With this bottle loading and arranging machine, there will be less operators required to perform supplying the bottles to the air conveyor.
It has the main function of loading the bottles and arranging them in the correct direction automatically and quickly. The operators just need to supply pet bottles to the tray, the machine then will automatically load and arrange them properly.
Hourly operation capacity: 12,000 bottles/hour
ဒီစက်ကို အသုံးပြုတာကြောင့် ဘူးတွေကို လေရွေ့လျားစက်ဆီကို ရွှေ့ပေးဖို့ အော်ပရေတာ အနည်းငယ်ပဲ လိုပါတယ်။
ဒီစက်က ဘူးတွေကို နေရာမှန်မှန်နဲ့ လျင်မြန်စွာ အော်တိုသယ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အော်ပရေတာတွေက ဘူးတွေကို ဗန်းထဲ ထည့်ပေးရုံပါပဲ။ စက်က အော်တိုသယ်သွားပြီး စီပေးမှာပါ။
တစ်နာရီမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-ဘူးပေါင်း ၁၂၀၀၀
Technical specifications (နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (BPH) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 10000-12000
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 1.5
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 2600X2600X2500
Weight (Kg) အလေးချိန် 2000
The machine hasacompact design withaframe,aconveyor, an air duct system, and air nozzles.
Function: It uses air pressure to dry the bottles
ဒီစက်မှာ ဖရိန်တစ်ခု၊ ရွေ့လျားစက်တစ်ခု၊ လေပြွန်တစ်ခုနဲ့ လေနော်ဇယ်တွေ ပါပါတယ်။
ဘူးလေမှုတ်စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
Capacity (bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 10000-22000
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 1700*800*1500
3. VAL15000 Labeling machine with2heads
VAL15000 ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်ထုတ်စက်
Labeling machine with2heads ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်ထုတ်စက်
With2labeling heads, this machine brings much higher labeling capacity. The machine is suitable for the bottles with the diameter ranging from Φ28 to Φ125 and label length of 30-250mm.
It is 3.9m long, 1.2m wide and 2.1m high. The machine’s weight is 750kgs.
The entire machine frame is made of stainless steel SUS # 304 with high durability.
The labeling process is quick and less noisy.
There isasmart control panel that automatically switches off when there are no more label.
ခေါင်းနှစ်ခုပါတာကြောင့် လေဘယ်ပိုပြီး တပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်က အချင်း ၂၈-၁၂၅ ရှိတဲ့ ဘူးတွေအတွက် သင့်တော်ပြီး လေဘယ်အလျား ၃၀-၂၅၀ မီလီမီတာအထိ ရှိပါတယ်။ဒီစက်က အလျား ၃.၉ မီတာ၊ အနံ ၁.၂ မီတာနဲ့ အမြင့် ၂.၁ မီတာ ရှိပါတယ်။ ဒီစက်ရဲ့ အလေးချိန်က ၇၅၀ကီလိုဂရမ် ရှိပါတယ်။ စက်တစ်ခုလုံးကို SUS#304 စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ကြာရှည်ခံပါတယ်။ စက်က လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြန်ပြီး ဆူညံမှုနည်းပါတယ်။ လေဘယ်တွေ ထပ်မရှိတော့တဲ့အခါ ပိတ်သွားတဲ့ စမတ်ကျတဲ့ ထိန်းချုပ်ဘောင်လည်း ပါရှိပါတယ်။
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 9,000-15,000
Power capacity (kw/h) ပါဝါ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 5
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 3900*1200*2100
Weight (Kg) အလေးချိန် 750
4. The machine rotates automatically to label the bottles with opp labels and melt- VAR15000
စက်က ဘူးတွေကို ကော်ခြောက်နဲ့ ကပ်ပြီး လေဘယ်တပ်ရန် အော်တို လှည့်ပေးသည်---VAR1500
The machine rotates automatically to label the bottles with opp labels and VAR15000
The machine is used to label the round bottles with opp labels and melt glue.
There isacontrol panel attached to the body frame to adjust the labeling speed, rotating speed of the shaft as well as temperature.
With this machine, the labeling process is operated automatically, ensuring that the labels firmly adhere to the bottle with good appearance.
The businesses can reducealot of time and manpower with this automatic machine.
The machine is only suitable for the round bottles.
စက်က ဘူးတွေကို ကော်ခြောက်နဲ့ ကပ်ပြီး လေဘယ်တပ်ရန် အော်တို လှည့်ပေးသည်---VAR15000
ကိုယ်ထည်ဖရိန်မှာ လေဘယ်တပ်တဲ့နှုန်း၊ တိုင်ရဲ့လှည့်တဲ့နှုန်း နဲ့ အပူကို ထိန်းညှိဖို့ ထိန်းချုပ်ဘောင် ပါပါတယ်။
ဒီစက်နဲ့ဆိုရင် လေဘယ်တပ်တဲ့ လုပ်ငန်းက အော်တိုလည်ပတ်ပြီး လေဘယ်တွေက ကြည့်လိုကောင်းပြီး ခိုင်မြဲစွာ ကပ်နေမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီစက်နဲ့ဆိုရင် အချိန်ရော လူလုပ်အားရော ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
ဒီစက်ကို ဘူးအ၀ိုင်းတွေအတွက်သာ သုံးလို့ရပါတယ်။
Capacity (bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 9,000-15,000
5. VAS15000 Steam Membrane Shrinking Machine
VAS 15000 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
Function: Use the heat of the steam to shrink the film onto the bottles
The machine consists ofaboiler,asteam duct and andamembrane shrinking chamber
Boiler: Using electricity to boil the water, the heat of the hot water is then turned into the heat of the steam. The water is pumped and sucked constantly through the water tank and pumped continuously into the boiler. The steam is transferred to the membrane shrink chamber through the duct. The bottles are sent to the membrane shrinking chamber through the conveyor system. The heat of the steam will deform the shrink films, keeping them firmly adhere to the bottles.
လုပ်ဆောင်ချက်-ရေနွေးငွေ့အပူကို သုံးပြီး ဘူးပေါ်တွင် ဖလင်ကို ရှုံ့ပေးသည်။
ဒီစက်မှာ ရေနွေးအိုး၊ ရေနွေးငွေ့ပြွန်နဲ့ အလွှာကို ရှုံ့ပေးတဲ့ အကန့် ပါပါတယ်။
ရေနွေးအိုး-လျှပ်စစ်အားသုံးပြီး ရေကိုဆူပွက်အောင်လုပ်မယ်။ ရေရဲ့အပူက ရေနွေးငွေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမယ်။ ရေကို ရေစည်ကိုဖြတ်ပြီး စုပ်ယူပြီးတော့ ရေနွေးအိုးထဲ စုပ်တင်မယ်။ ရေနွေးငွေ့ကို ပြွန်ကိုဖြတ်ပြီး အလွှာကို ရှုံ့ပေးတဲ့ အခန်းကို ရွှေ့ပေးပါမယ်။ ဘူးတွေကို ရွေ့လျားစက်စနစ်ကို ဖြတ်ပြီး ရှုံ့ပေးတဲ့ အကန့်ဆီကို ပို့ပေးပါမယ်။ ရေနွေးငွေ့ရဲ့ အပူက ဖလင်အလွှာကို ပုံပျက်စေပြီး ဘူးမှာ ကပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 10,000-15,000
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 24
VA22000 မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်
Function: Print expiry date onto the finished bottlesFunction: Print expiry date onto the finished bottles
With the application of modern technology, the printing mold is not required to directly contact to the printing surface
လုပ်ဆောင်ချက်- ဘူးတွေပေါ်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် ပရင့်ထုတ်ခြင်းခေတ်မီနည်းပညာ အသုံးပြုထားတာကြောင့် ပရင့်ထုတ်တဲ့ ပုံစံခွက်က ပရင့်ထုတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စရာ မလိုပါဘူး။
Fast printingUp to3lines of text can be printed
The printing is nice and sharp
The machine operates stably with high durability
Suitable for th pet bottles
• ပရင့်ထုတ်ခြင်းက လျင်မြန်တယ်
• လိုင်း ၃ ကြောင်းအထိ ပရင့်ထုတ်နိုင်တယ်
• ပရင့်က ချွန်ထက်ပြီး ကောင်းတယ်
• စက်က ကြာရှည် လည်ပတ်နိုင်တယ်
• ပက်ထ် ဘူးတွေအတွက် သင့်တော်တယ်
7. VAGM20000 Automatic log membrane shrinking machine
VAGM20000 လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
Automatic log membrane shrinking machineThis equipment is used to shrink PE, PVC, POF films wrapped onto the purified water bottles, pet plastic bottles.An automatic log membrane shrinking machine shall help to:
● Increase operational efficiency
● Make the products more eye-catching
● Create specific equity for the products
● Labor cost savingVAGM20000
လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက် ဒီစက်ကို PE,PVC,POF ဖလင်များကို ရေဘူးတွေ၊ ပက်ဘူးတွေအပေါ်မှာ ကပ်နေအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။VAGM20000 လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်က အောက်ကအချက်များကို လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်
• လုပ်ဆောင်မှုကို တိုးတက်စေခြင်း
• ပစ္စည်းတွေကို ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
• ပစ္စည်းအတွက် စပါယ်ရှယ် ရှယ်ယာတွေ ဖန်တီးပေးခြင်း
• အလုပ်သမားစရိတ် လျှော့ချနိုင်ခြင်း
A closed chamber with indoor and outdoor for the products
A conveyor system made of high quality plastic
A pushing piston
A body frame and chassis made of powder coated steel
ကုန်ပစ္စည်းအတွင်းအပြင်နဲ့ နီးကပ်တဲ့ အကန့်
အရည်အသွေးမြင့် ပလပ်စတစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရွေ့လျားစက်စနစ်
ပေါင်ဒါအုပ်ထားတဲ့ စတီးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်ထည်နဲ့ အောက်ခံထည်
Capacity: (bottles/hour,alog of 24 500ml) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 16,000-20,000
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 30
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 10000*1100*2200
Weight (Kg) အလေးချိန် 1200
● High productivity: The machine capacity is up to 15,000 bottles/h. Suitable for the large scale manufacturing factories. Applying modern technology into manufacturing and business activities.
● ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခြင်း- ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၁၅၀၀၀ ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်း အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
● Simple operation process: After installation, Viet An's engineering team will provide you with thorough technical guidance. Instruction content includes machine structure, how to control and operate the equipment. Common errors and how to fix them
● ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်မှု- တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ Viet An အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့က နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှု အားလုံးး ပေးမှာပါ။ လမ်းညွှန်ချက်မှာ စက်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စက်ကို ထိန်းချုပ်ပုံနဲ့ ကိရိယာတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေ၊ ဖြစ်တတ်တဲ့ မှားယွင်းချက်တွေနဲ့ ဘယ်လို ပြင်ရမလဲဆိုတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
● Free shipping-installation nationwide
● တစ်နိုင်ငံလုံးကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
● Warranty: 12 year: Viet An appliesa12 month warranty for all of our6in 1 automatic filling machines. This on-site service is totally free.
● အာမခံချက်-၁၂ လ----Viet An မှ6in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်တွေကို ၁၂ လ အာမခံချက်ပေးပါတယ်။ ဆိုက်ထဲတွင် ၀န်ဆောင်မှု အခမဲ့ပါ။
Technical specifications of VACGF15000 automatic filling machine
VACGF 15000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
A. VACGF15000 FILLING MACHINE -6MUST -BUY ITEMS
VACGF 15000 လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ ၀ယ်ကိုဝယ်ရမည့် အဆင့် ၆ ဆင့်
Washing head ဆေးကြောပေးသောခေါင်း 32
Filling head ဖြည့်ပေးသောခေါင်း 32
Capping head အဖုံးတပ်ပေးသောခေါင်း 10
Machine capacity (350ml bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 13,000- 15,000
Machine capacity (500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 13,000- 15,000
Machine capacity (1,500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 4,000-4,500
Power ပါဝါ 6
3 in 1 Dimension(LxWxH) (mm)3in 1 အတိုင်းအတာ 2900*2200*2500
Weight အလေးချိန် 5500
Air conveyor လေဖြင့် သယ်ယူပေးသောစက် 8000*220*1000
Plastic conveyor (LxWxH) (mm) ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက် 30000*160
B. AUTOMATIC STEPS (PURCHASE SEPARATELY) TO BE INTEGRATED INTO VACGF150006IN 1 FILLING MACHINE
VACGF150006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
VALP12000 ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
VAL15000 ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်တပ်စက်
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက် VAS 15000
လော့အလွှာကို အော်တိုရှုံ့ပေးသောစက်-VAGM 20000
Hỏi đáp & đánh giá VACGF 150006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်